K: Our Celebrities
ပြည်သူချစ်သော အနုပညာ သည်များ
ခုရက်ထဲ မှာ ဇာ ဂနာ ..ကျော်သူ နဲ့ ကဗျာ ဆရာ အောင်ဝေး တို့ .. ရဲရင့်တက်ကြွ စွာ နဲ့ ပြည်သူ တွေ အတွက် ပြော နေပါပီ။ တိုင်း ပြည် မျက်နှာဖုံး .. လူ တို့ ရဲ့ အာ ရုံ ကျ ရာ အနုပညာ ရှင် တွေ လည်း အသံ တွေ ထွက် လာ ကြပါပီ။ မခိုင် ( ထွန်း အိန္ဒြာ ဗိုလ်) က တော့ မိုးကုတ်သူ ပီ ပီ... `မိုးပြို အများ ပါရှင်´ လို့ ပြော ရင်း သံဃာ ထု ကြီး ဘက်က .. ပြတ်ပြတ်သား သား ပြော လိုက် တာ က လည်း အားရ စရာ။
ဟော ဒါ Picasa မှာ တင်ထား တဲ့ ဓါတ်ပုံ တွေ ထဲက.. စိတ် ၀င်တစား မြင်လိုက်ရ တာ .. ။ ပြည်သူ့ မင်း သား ကျော်သူ ရဲ့ ပါရမီဖြည့် ဖက်.. ရွှေဇီးကွက် နဲ့ ပြည်သူ့  စာ ရေး ဆရာ မ ဒေါ် သန်းမြင့် အောင် တို့ ရဲ့ မှတ်တမ်းဝင် ဓါတ်ပုံလေး တွေ ပါ။ အောက်ဆုံး ပုံ က တော့ ကဗျာ ဆရာ အောင်ဝေးလို့ ယူဆ ရသော်လည်း သိပ်မသေ ချာ။
Labels: Celebes , Photos
The photo at the bottom is not poet Aung Way's photo. He is bespectacled. Last week Moemaka.com site has his photo.
I am proud of him and what he believes and what he have done in his life. He loves the country and he lives on Myanmar literature. All the concerned Burmese natives living in comfortable lives abroad should pay respect and help to the monks and Burmese people struggling for democracy.